NGABA KUFUNEKA UTHENGE ISIPHO SOMTSHATO UKUBA UYINTOMBI YOMFAZI? - IZIPHO
Eyona Izipho Ngaba kufuneka uthenge isipho somtshato ukuba uyintombi yomfazi?
Ngaba kufuneka uthenge isipho somtshato ukuba uyintombi yomfazi?
Impendulo emfutshane: Kuxhomekeke kuwe. Ifoto kaBrandon Kidd
Nabani na oye waba ngumtshakazi uhlala e-pro-mali-kwaye ngenxa yezizathu ezifanelekileyo. Ayisiyomfuneko kuphela ukuba uthenge ilokhwe yempelesi kunye nezihlangu, kodwa kufuneka ubhatale imali yokuhamba, indawo yokuhlala kunye neenwele ezinokubakho, izithambiso kunye neenzipho zosuku lomtshato. Kukwakhona ukuthuthwa, indawo yokuhlala, ukutya, iziselo, izipho kunye nokuzonwabisa kwitheko le-bachelorette (elinokuphela libiza ngaphezulu xa iintombi zihlawulela umtshakazi). Emva koko kukho isipho seqela lokuzibandakanya kunye nesipho sokuhlamba somtshato, kunye naziphi na iindleko ezongezelelekileyo ukuba ubamba okanye ungena kuyo nokuba yeyiphi, yeyiphi impelesi elungele ukuyenza. Ngaphambi kokuba uyazi, ubunokulahla ngokulula i- $ 2,000 komnye wabahlobo bakho abasenyongweni, kwaye iakhawunti yakho yebhanki inokuba iqhuma kumsi-kwaye uyakhumbula ukuba kufuneka uthenge isipho somtshato kwirejista. Kodwa ngaba ngokwenene unayo ukuya? Ukuba uziva buhlungu kukucinga ngokuchitha i-100 leedola ngaphezulu kwi-pillowcases kunye neseti yeemela zamasi, funda oku kuqala.
Okokuqala, akukho mthetho uthi iindwendwe zomtshato kufuneka zinike isipho somtshato-izibini akufuneki zilindele nantoni na kwasekuqaleni. Oku kuya kumalungu omtshato. Umgaqo omele ume kuwo kukungasebenzisi imali engaphaya kwamandla akho — nje kuphela loo nto ukhululekileyo kuyo. Kwaye ukuba uziva uchithe imali eyaneleyo kwaye awunakho ukufumana ezinye izipho, kulungile ke. Ngapha koko, ezinye izibini ziya kuthi emtshatweni wazo mazincame naziphi na izipho kwaye lonke uthando lwabo, ixesha kunye nenkxaso-ndingasathethi ke ngeendleko esele zikhankanyiwe-zingaphezulu.
Ukuba ungathanda ukufumana isipho kodwa ungabinakho ukubiza nantoni na enexabiso, kuqhelekile ukuba ungene kunye nabanye abatshati ngesipho esinye esikhulu. Kulungile ukuba ukhethe into ethile kuhlahlo-lwabiwo mali oluhle kubhaliso (njengefreyimu yemifanekiso engama- $ 25) ukuba ufuna ukusongela into kwaye uyihambise kwesi sibini. Unako nokuhamba ngendlela yakho kwaye ubenzele into isibini, uhambe ngendlela enomdla kwaye uthenge umhlobiso weKrisimesi kunye nomhla wabo womtshato kuwo okanye izinto zokubhala kunye neziqalo ezitsha zomhlobo wakho, okanye ukhethe ikhadi lesipho malunga nemali oyonwabisayo oyichithayo . Khumbula, ayibalulekanga ukuba uyichitha kangakanani imali oyichithayo — yinto yokuba isipho sakho sisuka entliziyweni.
izimvo zomtshato omncinci wasekhaya
utshate nini uMelania trump
indlela yokusombulula isimemo kusapho
Ndikuthanda kangakanani ucaphula kuye